Ny lalao sehatra 5 tsara indrindra ho an'ny Android | Androidsis
Iray amin'ireo sokajy lalao mahafinaritra sy nilalao indrindra tao amin'ny Play Store ny lohatenin'ny sehatra. Raha tsy fantatrao hoe inona izy ireo, dia lalao iray amina toetra iray na maromaro izy ireo - mandeha mitety ny ambaratonga na izao tontolo izao, hisorohana ny sakana sy / na ny famongorana sy ny ady amin'ny fahavalo. Ny ohatra fanta-daza sasany dia ahitana ny anaram-boninahitra Mario Bros amin'ny consoles samihafa, na desktop na portable.
Amin'ity fotoana ity dia manangona izahay Ireo lalao sehatra 5 tsara indrindra misy ankehitriny ao amin'ny Google Play Store ho an'ny finday avo lenta Android. Maimaimpoana ireo rehetra tanisaisinay amin'ity lahatsoratra fanangonana ity, tsara marihina, ankoatra ny iray amin'ireo mpilalao milalao, alaina ary mahafinaritra indrindra amin'ny magazay.
Etsy ambany no hahitanao andian-tsarimihetsika lalao 5 tsara indrindra ho an'ny finday Android. Tsara homarihina, toy ny fanaontsika hatrany, izany maimaim-poana daholo ireo ho hitanao amin'ity lahatsoratra fanangonana ity. Noho izany, tsy mila mandoa vola ianao raha te hahazo ny iray na izy rehetra. Na izany aza, ny iray na maromaro dia mety manana rafitra fandoavam-bola ao anaty, ahafahana miditra amin'ny atiny bebe kokoa ao anatiny, ary koa mahazo zavatra, loka ary valisoa. Toy izany koa, tsy ilaina ny mandoa vola fa ilaina ny mamerina azy. Eny eny, andao isika hanatratra azy.
2 Sonic The Hedgehog 2 Classical
3 Dan The Man - Miady sy mikapoka
Inona no fomba tsara kokoa hanombohana an'ity lisitra ity amin'ny lalao izay mampahatsiahy antsika betsaka an'i Mario malaza amin'ny Nintendo? Ary miaraka amin'ity fanontaniana kabary ity atsipy any amin'ny habakabaka ity dia tsy maintsy lazaina izany Lep's World dia iray amin'ireo lohateny lehibe nilalao tao amin'ny Play Store for Android, ary tsy ho an'ny tsy misy dikany, satria isika dia miatrika lalao efa tena nahomby izay manolotra lohahevitra tena mahaliana ary iharan'ny sary sariitatra tena feno sary mihetsika sy tontolo maro izay mahatonga ny fahasosorana tsy ho eo mihitsy.
Ampio Lep hitady sy hanangona ireo farantsa volamena rehetra azo atao amin'ny ambaratonga tsirairay, fa aza avela hanimba ny tanjony ireo fahavalo sy zavaboary hafahafa izay miseho eo. Misy ambaratonga 160 bebe kokoa ho hitanao Ary, na dia mora be aza ny voalohany, dia mihasarotra ny raharaha, satria manomboka ho sarotra ny mandeha tsikelikely. Blurgg, Long John, Super Sam ary Colleen dia sasany amin'ireo mpilalao 8 anananao ao amin'ny lalao, samy milalao peratra, robot, zombie ary maro hafa izy ireo. Misy ihany koa ireo zava-bita marobe vita ao amin'ny Lep's World izay hitazona ny sainao hamita ireo tontolo 6 sy ambaratonga maro amin'ny fomba tsara indrindra.
SEGA dia mampiseho ny fiheverany ireo mpilalao manana anaram-boninahitra taloha sy malaza, toa ny Sonic The Hedgehog 2 Classic, lalao taloha izay namboarina tsara ho an'ny finday Android. ary io lohatenin'ny sehatra io dia azo lalaovina amin'ny 60 FPS (frame isan-tsegondra) ary tsy misy sary miolakolaka. Izy io dia vatosoa tena izy ho an'ireo tia ny lalao Sonic, tsy misy isalasalana.
Amin'ity lalao ity, ny hedgehog malaza haingana dia haingana dia tsy maintsy mandresy tontolo sy sehatra maro, miaraka amin'ny sakana izay hanandrana hisoroka ny antony sy vola madinika an-jatony izay tsy maintsy angoniny mba ho ny tsara indrindra amin'ny rehetra. Mazava ho azy, Haingam-pandeha no mahery fo amin'ity lalao ity, satria tsy maintsy ampiasainao handrosoana amin'ny ambaratonga ary hiatrika ny Eggman, ilay olon-dratsy fanta-daza sy mpanohitra ny tontolon'ny Sony izay manandrana mitady ireo Chaos Esmeralds fito hananganana sy hamita fitaovam-piadiana mahery vaika izay mandrahona ny olon-drehetra.
Misy koa fomba lalao isan-karazany, toy ny fitsapana amin'ny fotoana, izay mila miady amin'ny fotoana sy hahatratra ny tanjona takiana. Misy ihany koa ny maody an-tserasera sy ny maody fanafihana boss, izay tsy maintsy hiatrehanao fahavalo sarotra. Ankoatr'izay, Mecha Sonic dia eo amin'ity lohateny ity, ary mpifaninana lehibe hafa amin'ny Sonic tany am-boalohany. Toy izany koa ianao, manana Tails sy Knuckles, naman'ny Sonic roa izay hanampy azy amin'ny diany ary hiady amin'ny ratsy. Manana fahaizana mahatalanjona koa ianao raha mahazo ny Chao Esmeralds rehetra amin'ny lalao.
Dan The Man - Miady sy mikapoka
Lalao platform lehibe iray hafa ho an'ny Android ny Dan The Man - Fight and Punch. Raha ny marina dia niresaka momba izany izahay tao amin'ny lahatsoratra fanangonana izay navoakanay vao tsy ela izay, izay momba Ny lalao ivelan'ny finday tsara indrindra ho an'ny finday avo lenta Android, ho an'ny Lalao hafa tsara hilalao rehefa any amin'ny faritra tsy misy fandrakofana momba ny angona finday sy Wi-Fi ianao.
Ao amin'ity lohateny ity ny totohondry sy ny ady dia tsy hita miharihary amin'ny tsy fahatongavany, ary ity dia zavatra azontsika tsoahina amin'ny fomba mora sy haingana amin'ny anarany. Izy io dia lalao iray izay azo lalaovina irery sy miaraka amin'ny namana, noho ny safidy marobe. Ary raha tsy manana namana ianao, dia azonao atao ny mampifanaraka an'iza na iza amin'ny safidy lalao haingana. Miady amin'ny tafiky ny miaramila, ny robot ary ny epic boss ao anaty epic adventure miaraka amina sakana maro izay hanandrana hisakana anao tsy hahatratra ny tanjona farany, dia ny miady amin'ny lehibe indrindra.
Tsy vitan'ny hoe hampiasa totohondry handesena fotsiny ianao, fa hampiasa fitaovam-piadiana sy teknika ady isan-karazany izay mahatonga an'i Dan The Man - Ady sy Punching ho lalao mampiala voly fa tsy ho monotonous akory. Mandritra izany fotoana izany dia manana sary sy sary mihetsika mamolavola izy izay mamorona azy lohateny hoe platforming mahaliana tokoa raha jerena, manamboatra fikitika Retro somary maranitra. Ary raha ampiantsika amin'izany ny feon-kira, izay mamandrika anao amin'ny tantara, satria manana lalao hahafaty ny fahasosorana ianao dia asa mora.
Etsy ankilany, ity dia iray amin'ireo lalao hetsika sy arcade nakarina indrindra tao amin'ny magazay, miaraka amin'ny fisintomana mihoatra ny 10 tapitrisa, isa 4.6-kintana ary hevitra sy hevitra tsara miisa 1.
Dan The Man - Miady sy mamono
Raha tianao ny lalao miaraka amin'ny sary Pixel Art, dia azonao atao ny mitia an'ity, satria manana sary mihetsika somary Retro izy io izay mitondra anao hiverina amin'ny fotoana iray izay nilalaovana an'ity lohahevitra ity ireo lalao birao an'ny konsoly voalohany eny an-tsena nomena ireto sary ireto tamin'io fotoana io .
Raha te hifandray amin'ilay tantara sy ny toetran'ny lalao dia tsara ny manamarika izany Xolan dia tovolahy manana foto-kevitra sy idealy izay mitaona azy hiady ho an'ny fahamarinana sy ny asa tsara. Mila manampy an'io toetra tsara io isika amin'ny dia amin'ny lalao sy ny tontolony ary ny ambaratonga maro mba hiverenan'ny fandriampahalemana sy ny ara-dalàna ny fiainany tany am-piandohana, satria manjaka ny ratsy. Mazava ho azy, manana tontolo sy haavo marobe izay tsy maintsy resintsika izy hahatratrarana an'io tanjona io.
Betsaka ny fahavalo sy fahasarotana izay hanandrana hahatonga an'i Xolan ho resy, ary tena sarotra ny fahavalo, ary izy io koa no tena sarotra resena amin'ny faran'ny tontolo. Ny toetra amam-panahy dia afaka mampiasa fahaiza-manao miavaka ary tsy maintsy mamita zava-bita sasany hanaporofoana fa izy no mpiambina tsara indrindra ho an'ny rehetra.
Developer: Alper SarÄ ± kaya
Ity lalao ity dia somary tsy mitovy amin'ny lalao sehatra efa fantatra, satria manome dinika tany am-boalohany kokoa. Na izany aza, tsy mijanona ny maha lohateny manaraka tsara an'io karazana io, ka izay no antony ampidirantsika azy ato amin'ity paositra ity.
Badland dia iray amin'ireo lalao tsara indrindra amin'ny sokajy misy azy, nahazo loka imbetsaka ho iray amin'ireo lohateny indie mahaliana indrindra. Raha ny tena izy, teo anelanelan'ny taona 2012 sy 2013 dia izy no nahazo loka toa ny PAX, ny SCEE an'ny Game Connection Europe ary ny Nordic Indie Sensation Award ao amin'ny Nordic Game.
Ny toerana ao amin'ity lalao ity dia tena mahasarika, miaraka amin'ny ala, ala ary zavaboary mahatalanjona no antony mahatonga ny traikefa an-tsary tsy misy toy izany. Eto dia tsy maintsy mandeha manidina ianao fa tsy mandeha, mihazakazaka na mitsambikina toy ny ankamaroan'ny lalao sehatra ao amin'ny magazay.
Ao amin'ny ala Badland dia misy zavatra hafahafa mitranga ary tsy maintsy fantarinao hoe inona izany, fa tsy tokony tsy hisoroka ny sakana rehetra, ny fahasarotana ary ny sakana izay ho tojo anao amin'ny dia eto amin'ity tontolo miafina ity. Azonao atao ny milalao azy amin'ny maody solo, fa manana maody multiplayer ihany koa ianao ahafahanao mifanerasera amin'ny namana telo hafa ary mankafy kokoa ny lalao. Misy ambaratonga samihafa mihoatra ny 100 izay tsy maintsy sorohinao. Toy izany koa, manana mpampanonta ambaratonga ianao, mba hahafahanao milalao azy ireo isaky ny tianao ary, raha tianao dia zarao.
Ity lalao ity dia manana laza malaza ao amin'ny Google Play Store, miaraka amina maherin'ny 10 tapitrisa nangonina hatramin'ny nanombohany 10 taona lasa izay, naoty 4.5 kintana ary fanehoan-kevitra miabo 1 tapitrisa mahery. Izy io dia lalao an-tsehatra mendrika andrana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Ny lalao sehatra 5 tsara indrindra ho an'ny Android
Lalao 10 malaza indrindra ho an'ny Android